Liverpool oo Sturridge iyo Ince ku dooneysa 18 milyan oo ginni. - Caasimada Online
Home Warar Liverpool oo Sturridge iyo Ince ku dooneysa 18 milyan oo ginni.
Liverpool oo Sturridge iyo Ince ku dooneysa 18 milyan oo ginni.
Liverpool ayaa 18 milyan oo ginni Janaayo kula soo wareegi doonta weeraryahano xoog badan ka dib markii ay wadaladalo talaabo qaaday oo heshiis ah la fureen Daniel Sturridge iyo Thomas Ince.
Brendan Rodgers ayaa rajeynaya inuu gacanta kusoo dhigo xidigahaan sanadka cusub horaantiisa waxaana hada doorka koowaad ee diirada u saaran ah labadaan weeraryahan.
Weeraryahanka kooxda Chelsea Sturridge ayaa rajeynayaa inay Liverpool ku qiimeyso 12 milyan oo ginni, halka weeraryahanka Blackpool Ince ay dib ugu soo ceshan doonaan 6 milyan oo ginni ka dib markii uu 18 bilood ka hor ka dhaqaaqay Anfield markaasoo lagu gatay 250 kun oo ginni.
Rodgers ayaa sheegay bishii lasoo dhaafay inuu isha ku haayo xidigahaan oo uu u arko kuwo uu weerarka isaga dhiso Ince ayaa 20 jir halka Sturridge uu 23 jir yahay. Wuxuuna tababarihii hore ee Swensea jeclaan lahaa saxiixa Walcott laakiin wuxuu doonayaa xagaaga soo aadan.